को बन्लान् राखेप सदस्यसचिव ? | सिंहदरबार Daily
Home खेलकुद को बन्लान् राखेप सदस्यसचिव ?
को बन्लान् राखेप सदस्यसचिव ?
काठमाडौँ । आज मन्त्रीपरिषद् बैठक बस्दैछ । आज बस्ने बैठकले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)मा सदस्यसचिव नियुक्त गर्ने छ भने दुईजना डिआइजीलाई एआइजीमा बढुवा गर्ने छ ।
सदस्यसचिवका लागि सिफारिस समितिले तीन जनाको नाम युवा तथा खेलकूदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मासमक्ष सिफारिस गरेको हो । सिफारिस हुनेमा रमेशकुमार सिलवाल, लीलबहादुर थापा र अञ्जु श्रेष्ठ रहेका छन् ।
मन्त्रालयले सदस्य सचिव नियुक्तिका लागि रामप्रसाद थपलिया संयोजक तथा रिम रानाभाट र इन्दिरा निरौला सदस्य रहेको सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । समितिले सदस्य सचिवका लागि गत असार २६ गते सात दिने खुला दर्खास्त आह्वान गरेको थियो । उक्त अवधिमा सदस्य सचिवका लागि तीन महिलासहित २७ जनाले निवेदन दिएका थिए ।
सदस्य सचिवका लागि सिफारिस गरिएका सिलवाल यसअघिका सदस्य सचिव हुन् । यस्तै अर्का व्यक्ति थापा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का केन्द्रीय सदस्य हुन् । सिफारिस गरिएकी श्रेष्ठ राष्ट्रिय महिला भलिबल टोलीकी पूर्व कप्तान हुन् । तीनजना मध्ये सिलवाल निवर्तमान सदस्यसचिव हुन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली निकट उनी फेरि पनि नियुक्त हुने सम्भावना बलियो छ ।
आजको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राखेपको नयाँ सदस्य सचिवको नियुक्त गर्न लागेको हो ।
यस्तै, आजै बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुईजना डिआइजीलाई एआइजीमा बढुवा गर्ने छ। गृहमन्त्रालयको सिफारिस अनुसार डिआइजी निरजबहादुर शाही र प्रधुन्न कार्कीको एआइजीमा बढुवा हुने छ । दुवैजना अहिलेका आइजी शैलेश थापा क्षेत्रीका ब्याजी हुन् ।
Previous articleभदौका लागि तय भएको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको परीक्षा स्थगित
Next articleआजको राशिफल – २०७७ साउन १३, मंगलवार।
बामदेवले धोका दिएको प्रचण्डको निष्कर्ष
फुलहम प्रिमियर लिगमा फर्कियो
नेकपामा पार्टी एकता जोगाउन केन्द्रीय कमिटी बैठक माग, १४० सदस्यले प्रचण्ड-ओलीलाई हस्ताक्षर बुझाउँदै
बेलायती भूमिमा नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम खेल्ने
रोनाल्डोको कीर्तिमानी गोल तर युभेन्ट्स पराजित